Fandefasana sy fandraisam-bola : Hiara-hiasa amin’ireo paositra 53 any ivelany ny paositra malagasy -
AccueilSongandinaFandefasana sy fandraisam-bola : Hiara-hiasa amin’ireo paositra 53 any ivelany ny paositra malagasy
Fandefasana sy fandraisam-bola : Hiara-hiasa amin’ireo paositra 53 any ivelany ny paositra malagasy
Manaraka ny fivoaran’ny teknolojia. Sehatra iray nahafantarana ny paositra tao anatin’ny taona maro ny fandefasana taratasy. Manoloana ny fivoaran’ny teknolojia amin’izao fotoana dia efa mahalana ny fisian’ny olona mandefa taratasy. Tsy izay ihany anefa no asan’ny paositra fa misandrahaka amin’ny tolotra samihafa izany. Amin’izao fotoana dia hisy ny tolotra vaovao entin’ny paositra malagasy na Paoma ho an’ny mpanjifa dia ny E-Mandat Vaovao (EMV) izay hanomboka amin’ny herinandro hitsidika io. Fandefasana sy fandraisam-bola izy io nefa hiaraha-miasa amin’ireo paositra 53 any ivelany. Miainga amin’ilay tambazotra « Poste Transfert » io tolotra io, izay ahafahana mampifandray indray ireo Malagasy monina any ivelany sy ny eto an-toerana.
Araka izany, dia mbola ao anatin’ny fifaninanana ny Paositra malagasy izay miditra amin’ny fampiasana ny teknolojia vaovao sy ny fanohanan’ny vondrona iraisan’i afrikan’ireo paositra na ny UPAP. Hotanterahina eto Madagasikara rahateo ny 26 sy ny 27 jolay ho avy izao, eny amin’ny CCI Ivato ny fihaonambe tsy ara-potoan’ny UPAP mba hanomanana ny kongresin’ny vondron’ireo Paositra Iraisan’ny rehetra na ny UPU, izay atao kosa any Addis-Abeba ny 3 ka hatramin’ny 7 septambra 2018.
Nandritra ny fihaonana faha-36 ny filankevitry UPAP ny volana mey 2017, no nanapahana ny handraisan’i Madagasikara io fihaonana io, izay handraisan’ireo solontena 200 mahery avy amin’ny firenena afrikana 43.
Etsy ankilan’izay, dia nanamarika ihany koa ny Paoma fa hiroso amin’ny fanantonana ny mpanjifa izy ireo. Nanamafy izany ny Tale Jeneralin’ny Paoma, Nirina Augustin Rakotomalala omaly nandritra ny famelabelarana tetsy amin’ny Hotel Colbert. 250 ny isan’ny biraon’ny Paositra manerana ny Nosy amin’izao fotoana nefa tanjona ny mbola hanokafana birao hafa. Anisan’ny eo am-pametrahana izany ny any Ambondromamy ary roa hafa eto Antananarivo any amin’ny distrikan’Atsimondrano. « Amin’ny maha asam-bahoaka ny Paositra, dia tsy tokony handeha Taxi-borosy ny mpanjifa raha ho any amin’ny Paositra », araka ny fanamarihan’ny minisitry ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny kajy mirindra, Maharanty Jean de Dieu.